Maxaa Laga Dhaxli Karaa, Is Dhexgalka Madax Dhaqameedka Iyo Siyaasiga W/Q Maxamuud Xeef
(Hadhwanaagnews) Thursday, December 07, 2017 06:43:54
Haddaba, xilligan waxa dhexda la isu dhigay dhaqankii caynkaas ahaa iyo siyaasadii waxaana golayaasheeda taagan odayaal madax dhaqameedyo
Marka laga hadlaayo madax dhaqameed iyo siyaasad waa laba aragti oo aad u kala fog waxaanad sawiranaysaa golayaal siyaasadeed oo lagaga hadlaayo istaraatiijaddo iyo doodo aad u waa weyn oo isla markaasna lagu gorfaynaayo, waxaanad dhinaca kale milicsanaysaa odayaal iyo guurti ku foogan danaha iyo wada xaajoodyada ka dhaxeeya cidda ay dood wadaagta yihiin oo ku salaysan dhaqanno soo jireen ah amaba kuwo hadda la dhidbaayo.
Haddaba, xilligan waxa dhexda la isu dhigay dhaqankii caynkaas ahaa iyo siyaasadii waxaana golayaasheeda taagan odayaal madax dhaqameedyo sheeganaya, balse xaqiiq ahaan aan ahayn oo keliya ka dhigtay shaqo waana mid halis ku ah ummada mustaqbalkeeda waxaana ka dhalan kara cawaaqibyo waa weyn oo
aan la mahadin.
Golayaasha dhaqabka ee qabiiladu waa meelaha lagaga hadlo mustaqbalka ummadeed iyada oo aan laga tageyn danta guud, balse haatan waxa soo ifbaxaaya kuwo caynkaa ka duwan oo keliya u adeega danaha cid gaar ah oo ku suntan sharaf ridka iyo dulaynta ummada ay hor joogtada u yihiin oo lagu dirqinaayo xamilaada waxyaabo aan xaq loogu lahayn oo keeni karta kala fogaansho iyo is aaminaad daro abadi ah.
Marka laga hadlaayo siyaasada iyo siyaasigu waxay adeegsadaan wax kasta oo ay u arkaan dan, balse madax dhaqameedku waxay ka hormariyaan danta ummada ay u yihiin madaxda, laakiin hadda ma jiraan arimaahaasi waxaana ka daran madax dhaqameedka oo siyaasigii wuu noqday mid cashar ka barta iyaga oo laba dhinac arinta u dhigaya.
Ummadda Somaliland maanta waxay ku jirtaa arin aan sansaan fiicnayn waxaana isu kaashaday siyaasi iyo madax dhaqameed isku sheeg isku adeega oo aan wax dan ah iyo xaajo ah aan ka lahayn kuwa hor joogaha ka dhigtay, waxaanay arimaahaasi keeni karaan waxyaabo aan la mahadin oo dib u dhac ku ah dalka iyo dadkaba.
Si kastaba, waxaynu dhawri doonaa mustaqbalka waxa uu ku danbeyn doono, isku milanka siyaasada iyo madax dhaqameedka ka habawsan jidkii saxda ahaa ee loo igmaday.